Fadlan Deg-deg Noo Dhaaf!! Halyey Arsenal Ah Oo Ka Dalbaday Mesut Ozil Inuu Si Deg-deg Ah U Faaruqiyo Qolka Lebbiska - Gool24.Net
Fadlan Deg-deg Noo Dhaaf!! Halyey Arsenal Ah Oo Ka Dalbaday Mesut Ozil Inuu Si Deg-deg Ah U Faaruqiyo Qolka Lebbiska
Halyeygii Arsenal ee Martin Keown ayaa u sheegay Mestu Ozil inuu si deg-deg ah uga baxo qolka lebbiska kooxda uu iskaga tago, kaddib markii laacibkan laga reebay ciyaartoyda kooxda uga qayb-geli doonta tartanka Europa League.
Martin Keown oo difaaca uga ciyaari jiray Arsenal, waxa uu rumaysan yahay in Mikel Arteta aanu la dhacsanayn Ozil, sababtoo ah, qiimayntiisa ayaa ka hoosaysa midda ciyaartoyda da’yarta ah garoonka kusoo bandhigaan.
Ozil oo laga reebay liiska 25ka ciyaartoy ee Mikel Arteta uu u gudbiyey UEFA ee ka qayb-geli doona kulamada groups-ka ee tartanka Europa League, ayaa waxa uu ku jiraa sannadkiisii ugu dambeeyey qandaraaska uu kula jiro Gunners, waxaana hadda soo baxaysa in kooxdu ay burburinayso heshiiskiisa oo ay bixin doonto lacag ka badan 13 milyan oo Gini oo uu 31 jirkani dalbaday.
Martin Keown ayaa isaguna soo jeediyey in Arsenal ay siiso lacagta uu mushahar ahaanta u qaadan lahaa Ozil si uu kooxda u faaruqiyo, waxaanu yidhi: “Marka aynu kasoo qaadno in Arteta uu siiyey fursad, isla markaana aanu ku faraxsanayn shaqadiisa. Ma aha qof ay ciyaartoyda kale wax ka baranayaan. Xaqiiqdii waxaan u maleeyaa inuu qalbi fiican yahay sababtoo ah dadaqooyinka uu bixiyo, laakiin waxa uu su’aal geliyey oo uu joojiyey inuu dhimo mushaharkiisa oo ciyaartoyda kalena saamayn ku yeeshay.”
Arsenal ayuu Martin Keown usoo jeediyey inay mushaharkiisa wada siiyaan Ozil oo ay ka takhalusaan, waxaanu yidhi: “Waxay u baahan yihiin inay khasaarahooda yareeyaan, isagana ay mushaharkiisa siiyaan.”
Intaa kaddib waxa uu Martin Keown u sheegay Mesut Ozil inuu kooxda dhaafo, waxaanu yidhi: “Fadlan si degdeg ah uga bax kooxda.”